Budata Browsers Ngwanrọ maka Windows
Budata Browsers Ngwanrọ
Nchọgharị Yandex bụ ihe nchọgharị intaneti dị mfe, ngwa ngwa ma baa uru nke engine nchọgharị kachasị ewu ewu na Russia, Yandex mepụtara. Dị ka ọ dị na Google Chrome, Yandex Browser, wuru na akụrụngwa Chromium, na-adọta uche site na njirimara ọrụ ya dị mfe. Budata ihe nchọgharị Yandex Ekele Yandex Browser, nke malitere igosi onwe ya na...
AdBlock bụ ngwa mgbakwunye igbochi mgbasa ozi kachasị mma ị nwere ike ibudata ma jiri maka nefu ma ọ bụrụ na ịchọrọ Microsoft Edge, Google Chrome ma ọ bụ Opera dị ka ihe nchọgharị weebụ na kọmputa Windows 10 gị. Site na iwepu mgbasa ozi etinye na isi ihe ụfọdụ na ibe weebụ, ọ na-azọpụta gị oke, na-echebe nzuzo gị nịntanetị ma na-enye gị...
Nchọgharị Nwere Obi Ike pụtara na sistemụ mgbasa ozi wuru ewu, nkwado https na weebụsaịtị niile, yana mmeghe ngwa ngwa nke ibe weebụ, emere maka ndị ọrụ na-achọ ọsọ na nchekwa na ihe nchọgharị weebụ. Pịa bọtịnụ Download Nwere Obi Ike nelu iji nwaa Obi Ike, ihe nchọgharị weebụ na ngwa ngwa, nchekwa na mmeri-mmeri karịa Google Chrome. Onye...
Chromium bụ ihe nchọgharị na-emeghe emeghe nke na-ewulite akụrụngwa nke Google Chrome. Ihe nchọgharị Chromium na-achọ inye ndị ọrụ ahụmịhe ntanetị kachasị mma na nsụgharị dị nchebe, ngwa ngwa, nke siri ike karị. A na-etolite Chromium oge niile na usoro nke sọftụwia na otu ndị mmepe sitere nakụkụ ụwa niile. Mmepe na-aga nihu nke teknụzụ...
Chromodo bụ ihe nchọgharị ịntanetị nke ụlọ ọrụ Comodo bipụtara, nke anyị maara nke ọma na ngwanrọ antivirus ya, na-adọta uche na mkpa ọ na-etinye na nchekwa. Chromodo, ihe nchọgharị ị nwere ike ibudata ma jiri kpamkpam na kọmputa gị, bụ isi ihe nchọgharị wuru na Chromium, nke na-etolite akụrụngwa nke Google Chrome. Nihi nke a, ihe...
Facebook AdBlock bụ ndọtị adblock na-egbochi mgbasa ozi na ikpo okwu Facebook ị jikọọ na ihe nchọgharị ahụ. Site na ndọtị a ị nwere ike ịgba ọsọ na ihe nchọgharị Google Chrome ị na-eji na kọmputa gị, ịnwere ike iwepụ mgbasa ozi ike gwụrụ gị ịhụ mgbe ebighi ebi. Ọ bụrụ nịchọghị ịhụ mgbasa ozi Facebook na ihuenyo nchọgharị, enwere m ike...
Basilisk bụ ngwa nchọgharị weebụ nke mepere emepe nke onye nrụpụta nke ihe nchọgharị ọnwa ọnwa mepụtara. E wezụga ịbụ ihe nchọgharị weebụ nke oge a na nke juputara na ya, ọ na-achọ ichedo teknụzụ bara uru nke Firefox. Maka mgbakwunye, Basilisk nwere nkwado yiri nke ahụ maka ndọtị XUL / XPCOM na mgbakwunye NPAPI, ọ bụghị nke a niile ka...
Site na ndọtị nke CatBlock, ị nwere ike igosi foto pusi na ihe nchọgharị Google Chrome kama igbochi mgbasa ozi. Enwetara ego kachasị mkpa maka weebụsaịtị sitere na mgbasa ozi nkwado. Mbipụta mgbasa ozi na nloghachi maka ọrụ enyere na saịtị ahụ bụ ihe nkịtị ma dịkwa mkpa. Agbanyeghị, na weebụsaịtị ụfọdụ, enwere ike iji ọnọdụ a gbakwunye...
TunnelBear bụ mmemme na-aga nke ọma ị nwere ike iji duzie okporo ụzọ ịntanetị gị ma mee ka ọ dị ka ị na-enweta ịntanetị site na mba dị iche iche nụwa. Nụzọ dị otú a, ị nwere ike zoo njirimara gị site na sọfụfụ na ịntanetị na-enweghị aha. TunnelBear na-echebe nzuzo nke data gị niile site na izochi data data netiti gị na ihe nkesa ndị ọzọ...
Opera Neon bụ ihe nchọgharị intaneti mepụtara dị ka echiche site na otu ndị mepụtara ihe nchọgharị successfulntanetị na-aga nke ọma Opera. Opera Neon, nke bụ ihe nchọgharị na - akwụghị ụgwọ nke emere na akụrụngwa Chromium dị ka Google Chrome na Opera, na - enye anyị ahụmịhe bara uru karị site ninye anyị atụmatụ anyị ji site na ihe...
Vivaldi bụ ihe nchọgharị intaneti bara uru dị ukwuu, nke a pụrụ ịdabere na ya, nke nwere ngwa ngwa iji mebie nguzozi netiti Google Chrome, Mozilla Firefox na Internet Explorer, nke na-achịkwa ụlọ ọrụ ihe nchọgharị weebụ ogologo oge. Ihe nchọgharị intaneti ọhụrụ ahụ, nke Jon Von Tetzchner mepụtara, onye guzobere na mbụ CEO nke Opera...
Google Chrome Canary bụ aha Google nyere maka ụdị onye nrụpụta nke Chrome. Mgbe sistemụ gam akporo gbanwere na imepụta ihe, Google malitere imelite ngwa ọ rụpụtara, nke mbụ bụ YouTube, wee malite ịgbanwe atụmatụ nke ngwa dịka Gmail. Companylọ ọrụ ahụ, nke mere ka atụmatụ Google Drive dị ọhụrụ noge ọkọchị nke 2018, mechara tinye...
HTTPS Nebe ọ bụla enwere ike ịkọwa dịka mgbakwunye ihe nchọgharị ị nwere ike iji ma ọ bụrụ na ị na-eche banyere nchekwa ịntanetị gị. HTTPS Nebe ọ bụla nwere ike iche na ọ bụ usoro nke na-akpachapụ anya na-akpaghị aka site na ịlele ma saịtị ndị ị gara na ịntanetị ọ dị mma ma ọ bụ na ọ bụghị. Nwere ike ileba anya na ogbugba ndu nke...
Pomotodo pụtara dị ka ndọtị ndepụta ime nke ị nwere ike iji na Google Chrome. Mgbakwunye a, nke nweere onwe ya ma na -eme ihe nchọgharị weebụ gị ka ọ bụrụ ngwaọrụ maka ijikwa ọrụ gị nke kwesịrị ịrụ, na -enyere gị aka ịnweta ọrụ na ọrụ gị niile site na ebe ọ bụla noge ọ bụla, nihi ịdị adị ya na nyiwe mkpanaka ma na -enye ohere. ị ga...
Ihe nchọgharị Avant bụ ihe nchọgharị intaneti na-egbochi mgbochi mmapụta na flash plugins na-akpaghị aka mgbe ị na-enye ndị ọrụ ohere ịchọgharị ọtụtụ weebụsaịtị notu oge. Ihe omume a, nke na enyere ndi oru aka ihicha ihe omuma ha nile na residues ya na nhicha ya, putara ihe di ike. Site na engines ọchụchọ ya, ọ na - enyere ndị ọrụ aka...
Ghost Browser bụ ihe ntanetị dị ike ma rụọ ọrụ na ị nwere ike iji na kọmputa gị. Nwere ike ijikwa akaụntụ gị niile na otu windo na ihe nchọgharị ahụ, nke nwere atụmatụ dị ike karịa nke ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-eji ihe nchọgharị ịntanetị dị iche iche elele akaụntụ gị dị iche iche, nsogbu a ga-apụ nanya na Ghost Browser. Ghost Browser, nke...
Maxthon Cloud Browser bụ ihe nchọgharị weebụ na-akwụghị ụgwọ nke jisiri ike ịbawanye ntọala ofufe ya noge dị mkpirikpi ekele maka njikwa mmekọrịta enyi na-arụ ọrụ nke ọma. Na mgbakwunye, ihe nchọgharị ahụ na-enye ahụmịhe weebụ dị elu na arụmọrụ zuru oke nke ndị ọrụ. Na mgbakwunye, enwere ọtụtụ ngwaọrụ bara uru na mmemme iji mee ka mgbasa...
Edge bụ ihe nchọgharị weebụ Microsoft kachasị ọhụrụ. Microsoft Edge, nke bụ akụkụ nke Windows 10 na sistemụ arụmọrụ Windows 11, na -ewere ọnọdụ ya dị ka ihe nchọgharị weebụ ọgbara ọhụrụ na kọmputa Mac na Linux, ngwaọrụ iPhone na gam akporo, na Xbox. Niji ikpo okwu Chromium mepere emepe, Edge bụ ihe nchọgharị atọ kachasị eji eme ihe nụwa...
Ọ bụ ụdị ikpeazụ nke Internet Explorer, ihe nchọgharị ịntanetị na-abịa dị ka ihe nchọgharị ndabara na sistemụ arụmọrụ Windows 8, kwadebere maka ndị ọrụ Windows 7. Site na ụdị ikpeazụ nke Internet Explorer 10, nke enyere ndị ọrụ Windows 7, ewepụla erughị eru na njehie niile zutere noge usoro mmepe. Ibe weebụ juputara na eserese mara mma,...
Polarity bụ ihe nchọgharị weebụ bara uru nke na-enye igodo dabere na taabụ yana ebe nchekwa dị nihu. Niji Gecko Villanova na akụrụngwa Trident, mmemme ahụ nwere ngalaba ọkacha mmasị, onye editọ ibe edokọbara, nhọrọ njikọ proxy na njirimara nchebe paswọọdụ. Ekele maka ọnọdụ nkeonwe, mmemme na-egbochi ihe nchọgharị ịdekọ weebụsaịtị ị...
Emepụtara maka Google Chrome na ihe nchọgharị Safari, FiberTweet na-ewepụ njedebe mkpụrụedemede 140 na saịtị Twitter. Mgbe ị wụnye ngwa mgbakwunye, ị nwere ike ịhụ ozi na-akparaghị ókè sitere na ndị ọrụ ndị ọzọ na-eji ngwa mgbakwunye ahụ. Ndị ọrụ na-enweghị ngwa mgbakwunye arụnyere nwere ike ịhụ ozi ndị ọzọ site nenyemaka nke njikọ dị...
Maka Waterfox, anyị nwere ike ịsị Firefox 64 bit. Nụdị isi mmalite a, ị nwere ike ịnweta ma jiri mmelite Firefox niile, tinye-ons na ngwa, ekele maka ọganihu notu oge na Firefox. Atụmatụ izugbe: Ị nwere ike imekọrịta na Firefox, Google Chrome. Ibe edokwubara, ndekọ gara aga, okwuntughe, kuki.Site na ịgbalite mmekọrịta, ị nwere ike iji...
Mmemme Citrio so na ihe nchọgharị weebụ ọzọ ị nwere ike iji na kọmpụta gị, enwere m ike ịsị na o meela nnukwu mbata na ụwa ihe nchọgharị. Dị ka e kwuru site emeputa nke usoro ihe omume, ọ nwere nnọọ mfe interface na m na-eche na ndị na-eme mkpesa banyere nchọgharị oghere ugboro ga-eju ekele a interface na-meghere ngwa ngwa o kwere omume....
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe nchọgharị ịntanetị ngwa ngwa ma nwee sistemụ 64 Bit, Cyberfox bụ ihe nchọgharị ịntanetị efu nke nwere ike ịnye gị ihe nchọgharị ịntanetị kachasị ngwa ngwa. Cyberfox, nke na-eji profaịlụ Firefox eme ihe ma bụrụ ihe na-aga nke ọma nke ihe nchọgharị a, na-eji ohere nchekwa dị elu na ikike njikwa akụrụngwa, nke bụ...
Site na mgbakwunye ShutApp emepụtara maka ihe nchọgharị Mozilla Firefox, ị nwere ike zoo ọkwa online” gị mgbe ị na-eji Weebụ WhatsApp wee gaa nihu na-ezi ozi namaghị ndị mmadụ ị na-achọghị ka a hụ ya. Ụdị Weebụ WhatsApp, nke WhatsApp malitere nafọ gara aga, bụ ihe ọhụrụ dị oke mkpa iji gaa nihu nozi anyị na-akwụsịghị akwụsị. Ekele...
Slimjet so na ihe nchọgharị chrome. Ọ bụ ihe nchọgharị weebụ gosipụtara nke ọma dị iche na Google Chrome, Firefox, Opera na ihe nchọgharị weebụ ndị ọzọ nihi na ọ nwere ihe mgbakwunye nke onye ọrụ na-achọkarị. Agbanyeghị na ọ naghị aga nke ọma dị ka ihe nchọgharị ịntanetị nke oge a, ọ na-arụ ọrụ nke ọma. Anyị na-eji ihe nchọgharị ahụ,...
Nbudata Nhazi bụ mgbakwunye nbudata maka Firefox. Site na usoro a ga-eji na obodo anyị ka oge na-aga, Usoro eji eme ihe agaghị adị irè netiti 02.00 na 08.00 nụtụtụ. Nime awa ndị a, ị ga-enwe ike ibudata na-enweghị oke site na ọsọ nbudata ị na-eji. Maka nke a, ịkwesịrị ịnọdụ ala nihu kọmputa ma ọ bụ hazie ihe nbudata gị. Mgbakwunye...
Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị iji mmemme izi ozi siri ike ma ọ bụ dị mgbagwoju anya ma ị chere na ha na-egbu oge gị nọrụ, ị nwere ike iji Flock dozie nsogbu a. Usoro a, nke a na-enye kpamkpam nefu, nwere nsụgharị maka Mac, Chrome, Android na iOS, ewezuga PC desktọọpụ. Akụkụ kacha pụta ìhè nke ngwa a, nke ị nwere ike iji na ngwaọrụ mkpanaka gị...
Ngwa mgbakwunye ARC Welder pụtara dị ka ngwa mgbakwunye efu na-enye ndị ọrụ Google Chrome aka ịme ngwa gam akporo site na iji PC na ihe nchọgharị weebụ Chrome. Ihe mgbakwunye nke na-eji App Runtime maka Chrome, ya bụ, ARC, nke Google wepụtara maka ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị mmepe, na-enye gị ohere ịme ngwa Android site na Chrome gị...
Chekwa na Facebook bụ ndọtị Google Chrome na-enye gị ohere ịchekwa vidiyo, foto ma ọ bụ ederede masịrị gị na Facebook ka ị kesaa kọntaktị gị ma emechaa, wee nweta ha ngwa ngwa mgbe ọ bụla ịchọrọ. Enwere nhọrọ iji chekwaa ihe ọ bụla ekesara na Facebook maka ikiri ma emechaa, ma ị nwere ike ịnweta vidiyo, foto, ederede na ọdịnaya ndị ọzọ...
All-in-One Messenger bụ ndọtị Google Chrome na-eweta ngwa izi ozi nokpuru otu ụlọ. Nihi ngwa a, nke na-achịkọta ngwa ozi niile nokpuru otu ụlọ na-ejighi ngwaọrụ dị iche iche, ihe nchọgharị ma ọ bụ mmemme, ị nwere ike ịme mkparịta ụka gị nụzọ dị mfe karị. Ka anyị kwuo na enyi gị na-ezigara gị ozi site na Facebook Messenger, ebe onye otu...
Ihe nchọgharị CLIQZ, ihe nchọgharị weebụ mepere emepe, na-adọta mmasị site na nhazi ya dị oke ọsọ yana nchekwa. Site na ihe nchọgharị na-ebuga ịnyagharị na ịntanetị nụzọ ọhụrụ, ị nwere ike rụchaa ọtụtụ ọrụ gị nime sekọnd. Ihe nchọgharị CLIQZ, nke na-eme ka ọrụ ndị ọrụ dịkwuo mfe ma na-eme ka ịkwọ ụgbọ mmiri na ịntanetị na-atọ ụtọ, na-eji...
Mgbakwunye nchekwa Avast nịntanetị na-enye gị ohere ịbawanye nzuzo na nchekwa gị na ihe nchọgharị Google Chrome. Mgbe anyị na-achọgharị ịntanetị, anyị nwere ike izute ọtụtụ ihe egwu na azụmahịa anyị na-ejikarị eme ihe, dị ka ụlọ akụ, mgbasa ozi ọha na akaụntụ email, na-emebikwa. Mgbakwunye nchekwa Avast nịntanetị nwere ike nyochaa...
Mgbakwunye a, nke a na-akpọ Data Saver ma ọ bụ Data Saver, so na ndọtị a na-akwado maka ndị ọrụ Google Chrome ka ha gaa na webụsaịtị karịa nụzọ akụ na ụba na ngwa ngwa, Google na-akwadokwa ya. Ya mere, ịkwesighi inwe obi abụọ ma ọ bụ ahụ erughị ala tupu ịwụnye ya na ihe nchọgharị weebụ gị. Isi ọrụ nke ndọtị ahụ bụ iji hụ na mgbe ị gara...
Iji ngwa Hangouts, ị nwere ike iji akaụntụ Google ị nwere kpakọrịta ndị enyi gị nọ na listi gị. Ngwa ahụ, nke na-enye ohere dị mma iji ihe nkwụnye Google Chrome mee ihe, nwere ike ịbụ otu nime ngwaahịa kachasị amasị na nkwurịta okwu ederede na nke anya. Na-akwado ihe karịrị ọdịdị ihu 850, ngwaahịa a na-enye ohere hangouts, ma ọ bụ oku...
Enchancer maka YouTube bụ mgbakwunye dị maka Microsoft Edge. Enchancer maka YouTube, otu nime mgbakwunye ọhụrụ kachasị ọhụrụ ị nwere ike iji na ihe nchọgharị Microsoft Edge ọhụrụ, na-enye gị ohere ịme mgbanwe zuru ezu na YouTube, saịtị ọkpụkpọ vidiyo kachasị ewu ewu. Njirimara nke ngwa mgbakwunye bụ ndị a: Nhọrọ nke ịhazi ya dị...
SRWare Iron, nke anyị nwere ike ịkpọ ihe ọzọ Chromium, nwere ike ịrụ ọrụ niile ihe nchọgharị weebụ gị na-eme. Otu nime ihe atụ mbụ iji akụrụngwa Chromium, SRWare Iron bụ ihe nchọgharị weebụ nke nwere njirimara niile dị ike akụrụngwa na-eweta, mana dịkwa iche na ndịiche ya. A na-eji ya kemgbe 2008. Atụmatụ na-arụ ọrụ na Google Chrome mana...
SeaMonkey bụ ọrụ na-achịkọta ngwa ngwa niile ịchọrọ mgbe ị na-eme nchọgharị na ịntanetị. SeaMonkey bụ ihe nchọgharị weebụ, onye njikwa email, onye nchịkọta akụkọ HTML, mmemme nkata IRC na onye na-achọpụta akụkọ. Ihe omume a, nke ejiri ahụmịhe Mozilla mebere, bụ ngwa ịntanetị efu na mgbagwoju anya.Dịka ọ dị nọrụ Mozilla ndị ọzọ, SeaMonkey...
Ihe nchọgharị weebụ Maxthon bụ ihe nchọgharị tabbed siri ike emebere maka ndị ọrụ niile. Ewezuga ọrụ nchọgharị niile bụ isi, Maxthon Browser na-enye gị ọtụtụ atụmatụ bara ụba nke ga-eme ka ahụmịhe ịnyagharị ịntanetị ka mma. Maxthon na-abịa na njirimara niile mara mma nke ga-enye gị ahụmihe weebụ dị ntụsara ahụ, ihe ọchị na nkeonwe....
Ihe ndọtị Proxy Helper so na ndọtị nke ndị ọrụ Google Chrome na ihe nchọgharị weebụ nwere Chromium nwere ike chọọ ịchọgharị, a na-enye ya ndị ọrụ nefu. Dị ka ị nwere ike ịghọta site na aha ya, ndọtị ahụ, nke a kwadebere maka ndị ọrụ iji mee ka ntọala proxy na Chrome dịkwuo mfe, bụ otu nime ngwaọrụ ndị kachasị mkpa, karịsịa maka ijikọ na...
Auslogics Browser Care bụ mmemme efu ebe ndị ọrụ nwere ike hazie ntọala nke ihe nchọgharị ha na-eji na kọmpụta ha wee hichaa mgbakwunye na-enweghị isi eji na ihe nchọgharị ahụ. Usoro ihe omume ahụ, nke nwere ngwa ọrụ nkecha na nke oge a, na-enye ọtụtụ nhọrọ maka ma ndị ọrụ nkịtị na ndị ọrụ ọkachamara. E nwere atọ dị iche iche taabụ na...